Tsy ny rehetra ho tafita velona mpitrandraka fampihenana ny vola lany bitcoin - Blockchain News
Febroary 6, 2018 Admin
Tsy ny rehetra ho tafita velona mpitrandraka fampihenana ny vola lany bitcoin
Ohatrinona no tokony bitcoin vola lany harena ankibon'ny tany indray mba lasa mahasoa?
A 70% rano indray mitete ao amin'ny vidin-bitcoin avy any amin'ny tapaky ny volana Desambra saika nampihena ny profitability ny harena ankibon'ny tany. Amin'ny vidiny ankehitriny haavon'ny, nianjera ho faran'izay kely ny $ 6,048, afa-tsy ny lehibe indrindra mpitrandraka dia afaka mijanona mitsinkafona. Fa ny fanadihadiana ny Bloomberg dia mampiseho fa na dia eo amin'ny mpilalao lehibe tsy ny rehetra no tafavoaka velona.
ankehitriny, 67% ny harena ankibon'ny tany-angovo dia saika miangona ao amin'ny tanan'ny dobo efatra: BTC.com, AntPool, SlushPool sy BTC.top. Fa Bloomberg mpandalina Tim Kulpan manamafy: “Raha tsy ny orinasa izay mitantana ny harena ankibon'ny tany fametrahana haingana indrindra nividy amin'ny vidiny ambongadiny, dia tena azo inoana fa very vola ianao.” Ny mitsangàna Desambra nampitombo ny harena ankibon'ny tany amin'ny alalan'ny tsena 40%, izay nitarika ho amin'ny fitoviana ny rafitra: araka ny Blockchain.info, izy izay dia 51% mafy kokoa mba hanesorana ny andian-tsoratra.
Na dia nitombo be pitsiny ny kajikajy sy ny habetsaky ny angovo lany ritra. Raha bitcoin nijanona teo amin'ny 50 andro eo ho eo mampihetsi-po $ 13,200, Ary ny amin'izao fotoana izao sy ny isan'ny pitsiny hashes, ny eo ho eo ny mpitrandraka tamin'ny fitaovana tsara dia hahazo $ 80 isan-kerinandro (fa ny be taona ny fitaovana, ny ambany ny tombom-barotra). Na izany aza, na dia mandroso indrindra bitcoin-fitrandrahana fametrahana tsy miaro hanohitra ny mety ho very vola, rehefa latsaka ny vidiny mafy, ary ny mpitrandraka mijanona ao amin'ny tambajotra: ny mpitrandraka mijaly fatiantoka amin'ny vidin'ny manomboka ny fotoana $ 6,800.
Raha ny vidiny tsy hitsangana, dia eo ho eo ny mpitrandraka ho very $ 3 isan-kerinandro. fitrandrahana dobo, toy ny AntPool, afaka hitoetra ao amin'ny faritany tsara, fa ny tombony ho 90% ambany noho ny amin'ny 50 andro eo ho eo mampihetsi-po $ 13,200.
Tim Kulpan hita taratra ihany, in ny heviny, zava-misy, izay ny harena ankibon'ny tany dia ho indray ho mahasoa: ny fitomboan'ny bitcoin amin'ny maintsy famoahana ny ampahany amin'ny mpitrandraka avy amin'ny lalao, mba hampihenana ny fifaninanana. Ny mpandalina dia antoka fa ny mpandray anjara rehetra, amin'izao fotoana izao dia tsy ho afaka mba tsy fatiantoka: na olona iray dia manafaka “ny harena ankibon'ny tany sambo” avy amin'ny lanja, na ny olona rehetra ho faty an-drano.
Raha toa ianao ka olona tsy miankina, ary te-fitrandrahana harena ankibon'ny tany sy ny hafa Bitcoin Cryptocurrency, fa tsara indrindra ny manao izany amin'ny alalan'ny Cloud harena ankibon'ny tany, mandoa vola ny manam-pahaizana manokana sy hankafy ny soa izay orinasa lehibe mahazo. Ireto ny ambony 3 orinasa for Cloud harena ankibon'ny tany: Hashflare, IQMining na Genesisy Mining
Mikasa ny governemanta Koreana ...
bitcoinandian-tsoratra rojorahona fitrandrahanampitrandrakafitrandrahanavaovao
Previous Post:Efatra ihany Crypto fifanakalozana mankatò ny fepetra any amin'ny tany atsimo Koreana regulator
Next Post:Teknolojia vaovao avy hamaha ny Scalability Bitcoin